नेपालकै बैज्ञानिक डा. महावीर पुनले बनाएको इलेक्ट्रिक कार केहि दिनमै नेपाली रोडमा गुड्ने! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
नेपालकै बैज्ञानिक डा. महावीर पुनले बनाएको इलेक्ट्रिक कार केहि दिनमै नेपाली रोडमा गुड्ने!
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले सुरु गरेको पुराना डिजेल पेट्रोल गाडीलाई इलेक्ट्रीक बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । केन्द्रले पुराना गाडीलाई इलेक्ट्रीकमा परिवर्तन गर्ने योजनाका साथ काम गरिरहेको थियो ।
यो भन्दा अगाडि महाबीर पुनले कोरोना वि”रामीहरूसम्म खाना र मेडिकल सामान लिएर पुग्ने रोबर्ट र डाक्टर तथा नर्सहरूका लागि पिपिइ सकेत तैयार गरिसकेका छन् ।अहिले हामीले सबै काम सकेका छौं ।
त्यसको लागि आवश्यक पर्ने केही पार्टस चीनबाट मगाएका थियौं । त्यो भन्सारमा आएर रोकिएको छ । ती सामान आउनासाथ त्यसको परिक्षण सुरु हुने छ’, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनले भने ।पुनका अनुसार नेपालमा रहेका सबै पुराना गाडीलाई इलेक्ट्रीकमा परिमार्जन गर्न सकिन्छ।
त्यसले पैसा बाहिर जानबाट जोगाउछ भने वि”द्युत उपभोग बढाउँछ । ‘मैले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई प्रस्ताव गरेको छु । त्यो काम प्राधिकरणबाटै हुन सक्यो भने राम्रो संदेश जान्छ । अहिले प्राधिकरणसँग थुप्रै पुराना गाडी छन्’, पुनले भने ।
Previous को’रोना परीक्षण गर्नेमा नेपाल जापान भन्दा अगाडि छ : स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल,,हेर्नुहोस!
Next मेलम्चीको पानी प’रीक्षणको काम असारमै सम्पन्न हुने :मन्त्री बिना मगर ,,हेर्नुहोस!